Magaalada Muqdisho oo kaalinta labaad ka gashay magoolooyinka koraya. - Wargeyska Faafiye
Magaalada Muqdisho oo kaalinta labaad ka gashay magoolooyinka koraya.
Magaalada Xamar oo ay dagaallo ka jireen mudo ka badan 20 sano ayaa kaalinta labaad ka gashay magaalooyinka dunida ee sida xowliga ah u koraya sida ay qortay Consultancy Demographia oo laga leeyahay Mareeykanka oo wax ka qorta tirada dadka ee ku nool magaalooyinka caalamka.
Warbixinta hay’adda ayaa waxaa lagu sheegay in magaalada ugu horreysa caalamka ee soo koraysa ay tahay Batam oo ku taalla wadanka Indonesia, iyadoo la sheegay in shacabka ku nool ay tiradoodu tahay 1.1-milyan, ayna sanad kasta ay shacabkeedu kordhan 7.4%.
Magaalada labaad ee ayay hay’addani ku sheegtay inay tahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo sheegtay in tirada shacabka ku nool ay gaarayaan 2.1-milyan oo qof oo la sheegay in shacabkeedu ay kordheen 6.9%. Waxayna intaas ku dartay warbixintu in ay sabab u tahay dib u soo kabashada Muqdisho amniga xilligan ka jira kaddib in ka badan 20-sano oo ay colaado sokeeye ka jireen bulshada oo ganacsiga xooga saartay iyo sidoo kale qurbajoogta kusoo laabatay dalka oo sameeyey maalgashiyo badan.
Magaalada saddexaad ayaa noqotay magaalada Ouagadougou ee xarunta dalka Burkina Faso, taasoo ay ku nool yihiin 2.7-milyan oo ruux, ayna kordhaan 6.8%. iyadoo la xusay in magaaladaas ay maal-gashadaan ganacsato badan oo caalami ah, is bedelka qiimaha maciishada oo is bedela ayaa lagu sababay magaaladaasi.
Kaalinta afaraad ayaa waxaa gashay magaalada Xiamen oo ku taalla waddanka Shiinaha oo ay ku nool yihiin 4.4-milyan, taasoo ay shacabkeedu kordheen 6.7%. waxaa kaloo iyana ka mid ah magaalooyinka China ee koraya Yinchuan, taasoo ay ku nool yihiin 1.6-milyan oo qof, ayna kordheen 6.1% sannadihii lasoo dhaafay. Dhaqaalaha Shiinaha oo hoos udhacay ayaa lagu sababay in magaalooyinka dalkaasi ay hoos udhac xaga korintaanka uu ku imaado.
Sidoo kale, 15ka magaalo ee ugu horreeya xagga kororka dhaqaalaha dalka soo koraya ayaa la sheegay inay intoodaba yihiin Afrikan oo si xowli ah ukoraya sida ay war bixin kale ku sheegtay Hay’ada Oxford Economics oo wax ka qorta saadaasha koboco dhaqaalaha aduunka.
Magaalooyinka Qaaradda Afrika ee dhaqaalahoodu kordhayo ayaa la sheegay inay ka mid yihiin; caasimadda Niger ee Niamey, kaalimaha kalena waxaa liiskan ka galay Abuja oo ah xarunta Nigeria, Lusaka oo ah xarunta Zambia iyo magaalada Ouagadougou oo iyadana ah caasimadda dalka Burkina Faso.
Tanzania ayaa la sheegay in magaalooyinkiisa ay aad ugu kordhayaan dalxiisayaasha oo la sheegay inay booqdaan waxayna magaalooyinkaas kala yihiin; Dodoma, Mwanza iyo Dar Es Salaam, kuwaasoo la sheegay inay dhaqaale badan ka helaan dalxiisayaasha caalamiga ah ee taga.
Hay’adda consultancy Demographia ayaa warbixinteeda waxay ku sheegtay in magaalooyinka dhaqsaha u koraya ay caalamka uga yaallaan meelo kala duwan, ayna ku jiraan qaarkood dhibaatooyin aan xad lahayn, isla markaana aanay ka jirin shuruucdii lagu hagi lahaa kororka magaalooyinkaas ay sameynayaan.
Ugu dambeytii Afrika ayaa kobaceeda dhaqaalaha la sheegayaa inuu sii kordhaayo taas ayaa keentay in maalgashigeeda ay loollan adag ugalaan wadamada Shiinaha iyo Hindiya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSomali CID headquarters Bombed by Alshabaab.Daawo Video: Maxaa keenay is Furitaanka Badan qurbaha .Ciidamada Raaskambooni oo gabi ahaanba la wareegay Kismaayo.Create buffer zone along Kenya and Somalia borderCiidanka D. & Itoobiyaanka oo dagaal dhex maray